Imidlalo Yebhodi Yegumbi Lokubalekela Engcono Kakhulu engama-25 | Nginike isikhathi sokuphumula
Imidlalo yebhodi ye-Escape Room engcono kakhulu
Isaka | 20/12/2021 14:55 | Kubuyekezwe ku- 20/12/2021 16:06 | General
I-Los imidlalo yebhodi Escape Room Asekelwe ku-Escape Rooms wangempela, okungukuthi, amasethi noma izimo ezinezindikimba namagumbi ahlukene lapho iqembu labahlanganyeli livalelwe khona okumele baxazulule uchungechunge lwezindida futhi bathole imikhondo ukuze bakwazi ukuphuma egumbini ngaphambi kokuphela komdlalo. Isimo sezulu. Igeyimu ethuthukisa ukubambisana, ukubuka, ubuhlakani, ukuqonda, amakhono, namandla wecebo wayo ngayinye.
Impumelelo yalawa makamelo iphinde yaduma kakhulu imidlalo yebhodi yalolu hlobo, ikakhulukazi ngemva kwalolu bhubhane, njengoba amaningi ala magumbi avaliwe ukuze avikeleke, noma anemikhawulo ngokwamaqembu angangena. Ngakho ungakwazi ukudlala kusukela induduzo ekhaya lakho, futhi nomndeni wonke noma abangani. Kukhona okwakho konke okuthandayo neminyaka...
1 Imidlalo yebhodi ye-Escape Room engcono kakhulu
1.1 I-ThinkFun Escape The Room: Imfihlo KaDkt. Gravely
1.2 I-Operation Escape Room
1.3 I-Escape Room Umdlalo 2
1.4 Phuma: The Sunken Treasure
1.5 Vula! Izenzo Zobuqhawe
1.6 I-Escape Room Umdlalo 4
1.7 I-Escape Room I-Game Terror
1.8 I-Escape Room Umdlalo 3
1.9 I-Escape Room Umdlalo: Ihlathi
1.10 Iphathi ye-Escape
1.12 I-Escape The Room: Imfihlakalo ku-Observatory Mansion
1.13 Phuma: Ikhabethe Elilahliwe
1.14 Phuma: I-Terrifying Fair
1.15 Imidlalo Efihliwe: Icala Lokuqala - Ubugebengu bukaQuintana de la Matanza
1.16 Phuma: Ukufa ku-Orient Express
1.17 Phuma: I-Sinister Mansion
1.18 Phuma: The Mysterious Museum
1.19 Imidlalo Efihliwe: Icala Lesibili - I-Scarlet Diadem
1.20 Phuma: Ithuna likaFaro
1.21 Phuma: I-Secret Laboratory
1.22 Phuma: Ukugetshengwa eMississippi
1.23 I-Escape Room Umdlalo: Isikhathi Sokuhamba
1.24 Igumbi 25
1.25 Phuma: The Forgotten Island
2 Ungawukhetha kanjani umdlalo omuhle kakhulu we-Escape Room
Phakathi kwemidlalo yebhodi ye-Escape Room engcono kakhulu kukhona eminye izihloko eziheha ukunaka okukhethekile. Imidlalo emangalisayo ekucwilisa endaweni enemininingwane eminingi nalapho kuzodingeka ucindezele ubuchopho bakho ukuze uzame ukuxazulula izinselelo:
I-ThinkFun Escape The Room: Imfihlo KaDkt. Gravely
I-ThinkFun 76311, Escape ...
Lo mdlalo ngowomndeni wonke, njengoba umnandi futhi ufaneleke kahle kubo bonke ubudala kusukela eminyakeni eyi-13. Kuyo kufanele nisebenzisane nabanye abadlali (abafika ku-8) ukuxazulula izimfumbe, izindida, futhi uthole izinkomba zokuzama ukuxazulula imfihlo emnyama kaDokotela Gravely.
Thenga Imfihlo kaDkt Gravely
I-Operation Escape Room
I-Diset - I-Operation Escape ...
Umdlalo owenzelwe izingane ezineminyaka engu-6 ubudala. Inamazinga angu-3 obunzima, kanye nochungechunge lwamasondo e-roulette, okhiye, amakhadi, ikheji, i-timer, i-decoder yokuhlola, njll. Konke ukuxhumana nokuxazulula izinselelo zamakhono zokhiye, uchwepheshe wemibuzo yamasu, isondo lenhlanhla, njll.
Thenga Operation Escape Room
I-Escape Room Umdlalo 2
I-Diset- Escape Room the ...
Umdlalo webhodi le-Escape Room wayo yonke iminyaka kusukela eminyakeni engu-16. Kungaba okomdlali ongu-1 noma abadlali ababili, futhi inhloso kuzoba ukuxazulula uchungechunge lwezigigaba nezindida, ama-hieroglyphs, izimfumbe, ama-sudoku, amagama aphambene, njll. U-Con unohambo oluhlukile lwemizuzu engama-2: I-Prison Island ne-Asylum, kanye nohambo lwemizuzu engu-2 olwengeziwe olubizwa ngokuthi Ukuthunjwa.
Phuma: The Sunken Treasure
I-Devir - Phuma: Umcebo ...
Umdlalo webhodi le-Escape Room lapho wonke umuntu angabamba iqhaza, kusukela kwabaneminyaka engu-10 ubudala futhi kusukela kumdlali ongu-1 kuye kwabangu-4. Umgomo uwukuzicwilisa ohambweni oluhle kakhulu lokuthola umcebo ocwile ekujuleni kolwandle e-Santa María.
Thenga Umcebo Washona
Vula! Izenzo Zobuqhawe
Vula! Izigigaba zamaqhawe...
Lo mdlalo wohlobo lwe-Escape Room wethula umdlalo wekhadi, onethuba lokudlala kusuka kubadlali aba-1 kuye kwabangu-6, futhi ofanele wonke umuntu kusukela kwabaneminyaka eyi-10 ubudala. Isikhathi esilinganiselwe sokuxazulula le geyimu cishe amahora angu-2. I-adventure lapho ukubambisana nokuphunyuka kuzoba ukhiye, kufanele kuxazululwe izindida, ukucacisa amakhodi, njll.
Thenga Izigigaba Zamaqhawe
I-Escape Room Umdlalo 4
I-Diset - Escape Room the ...
Lo mdlalo webhodi le-Escape Room uqukethe izigigaba ezi-4 ezihlukene ezingaxazululwa esikhathini esingaphansi kwehora elingu-1. Ngezimfumbe, ama-hieroglyphs, izimfumbe, ama-sudokus, amagama aphikisanayo, njll. Ngamazinga ahlukene obunzima kanye nethuba lokudlala kusuka kubantu abangu-3 kuye kwabangu-5, kusukela eminyakeni engu-16. Ngokuqondene nezimo ezifakiwe yilezi: Ukuhlukana Kwejele, Igciwane, Ukubalwa Kwenuzi, kanye Nethempeli Lama-Aztec.
I-Escape Room I-Game Terror
I-Diset- Igumbi Lesibili Lokubalekela ...
Olunye uhlelo lwalolu chungechunge lwemidlalo lwabaneminyaka engaphezu kuka-16 nabadlali abangu-2. Izinselele, njengalena engenhla, zingaxazululwa ngaphansi kwemizuzu engama-60. Futhi kulesi simo, 2 okungenzeka ukuthi kunetimu esabekayo efakiwe: I-Lake House, kanye ne-Little Girl. Uyalokotha?
I-Escape Room Umdlalo 3
Elinye lamaphakethe athakazelisa kakhulu, anethuba lokudlala kusuka kubantu aba-3 kuye kwabangu-5 kusukela eminyakeni eyi-16. Kuhlanganisa konke okudingayo ohambweni lwehora elingu-4 oluqukethwe: I-Dawn of the Zombies, i-Panic on the Titanic, i-Alice in Wonderland, kanye nenye i-Dimension. Njengoba ungakwazi ukuqagela emagameni abo, ngezindikimba ezihlukahlukene.
I-Escape Room Umdlalo: Ihlathi
Uma ufuna okuqukethwe okwengeziwe ngalolu hlobo lwegeyimu, nazi ezinye izigigaba ezi-3 ezintsha ezingaphansi kwehora elingu-1. Ngenqwaba yezinselelo namazinga ahlukahlukene obunzima. Kulesi simo, izimo ezifakiwe yilezi: I-Magic Monkey, I-Snake Sting, ne-Moon Portal. Ibuye ilungele abantu abangu-3-5 kanye neminyaka engu-+16. Uhlelo Lomndeni ukuze nijabule nonke.
Odumile - Iphathi ye-Escape, ...
Umdlalo wohlobo lwe-Escape Room odizayinelwe izingane ezisuka eminyakeni eyi-10 ubudala. Ingadlalwa izikhathi eziningi, futhi iyamangaza njalo. Ngenqwaba yemibuzo nezimfumbe zokuzama ukuthola okhiye futhi ubalekele igumbi ngaphambi kokunye. Inemibuzo engaphezu kwama-500: izimfumbe eziyi-125, ulwazi olujwayelekile oluyi-125, izimfumbe eziyi-100, izinkinga zezibalo ezingama-50, ukucabanga okungemuva okungu-50 kanye nezinselelo ezibukwayo ezingama-50.
Thenga i-Escape Party
I-Larousse - Indlu ye ...
Uma uthanda uchungechunge lweSpanishi olunqobayo ku-Netflix, i-La casa de papel, i-Escape Room nayo idlaliwe. Kuyo ungaba omunye walabo abakhethwe ukwenza ukugetshengwa kwekhulunyaka e-National Mint and Stamp Factory eMadrid. Bonke abalingiswa nezigaba zohlelo okuzofanele zilandelwe ukuze kutholwe impango.
Thenga Indlu yephepha
I-Escape The Room: Imfihlakalo ku-Observatory Mansion
I-ThinkFun 76368, Escape ...
Lona omunye umdlalo kulolu chungechunge uvumela abadlali abangafika kwabayi-8 ukuthi babambe iqhaza, abaneminyaka engaphezu kwengu-10. Lapha abadlali bazongena emakamelweni alesi sakhiwo esimangalisayo ukuze baxazulule impicabadala, ukunyamalala kwesazi sezinkanyezi esasisebenza lapho.
Thenga i-Mystery endlini enkulu ye-Observatory
Phuma: Ikhabethe Elilahliwe
I-Devir - Phuma: Indlu ...
Isethingi yale geyimu iyikhabethe elahliwe, njengoba negama liphakamisa. Konke kuzungezwe izimfihlakalo. Umdlalo webhodi we-Escape Room ojabulisayo wobunzima obuthuthukile. Iminyaka engu-12 nangaphezulu, futhi nethuba lokudlala uwedwa noma nabadlali abangafika kwabayisi-6. Kulinganiselwa ukuthi kuzothatha phakathi kwemizuzu engama-45 nengama-90 ukuxazulula.
Thenga Ikhabethe Elilahliwe
Phuma: I-Terrifying Fair
I-Devir - Phuma: Okuhle...
Kusukela ochungechungeni olufanayo lwangaphambilini, futhi unale enye i-Escape Room esuselwe ekuhlelweni okwesabekayo, kulabo abancamela uhlobo oluthusayo. Ingadlalwa kusukela eminyakeni engu-10 ubudala, futhi nabadlali aba-1 kuye kwabangu-5. Akulula, futhi kungathatha phakathi kwemizuzu engama-45 nengama-90 ukuyixazulula.
Thenga umbukiso osabekayo
Imidlalo Efihliwe: Icala Lokuqala - Ubugebengu bukaQuintana de la Matanza
Isigcawu Semidlalo Efihliwe kusuka...
Kunezimo eziningana zalolu chungechunge lweMidlalo Efihliwe, eyodwa yayo ehunyushelwe kuSpanishi yilesi simo sokuqala. Zizwe njengomseshi kuleli cala. Umdlalo ohlukile, onomqondo omusha owenza ube ngokoqobo kakhulu. Kuyo kufanele uhlole imibhalo yobufakazi, uqinisekise i-alibis, futhi uvule umbulali. Bangadlala abadlali abasuka ko-1 kuye kwabangu-6, abaneminyaka engaphezu kuka-14 ubudala, futhi kungathatha phakathi kwehora elingu-1 nesigamu kanye namahora angu-2 nesigamu ukukuxazulula.
Thenga Ikesi Loku-1
Phuma: Ukufa ku-Orient Express
I-Devir - Phuma: Ukufa ...
Amanoveli namamuvi enziwe mayelana nalesi sihloko sakudala. Manje sekuza nalo mdlalo webhodi le-Escape Room lapho umdlali ongu-1 kuye kwabangu-4 abaneminyaka engu-12 nangaphezulu angabamba iqhaza. Uhlobo luyimfihlakalo, futhi isilungiselelo yisitimela senganekwane, lapho kwenziwe khona ukubulala futhi kufanele uxazulule icala.
Thenga Ukufa ku-Orient Express
Phuma: I-Sinister Mansion
I-Devir- Exit 11, The ...
Esinye futhi isihloko ongasengeza ochungechungeni lokuphuma. Idizayinelwe ngaphezulu kweminyaka eyi-10 nabadlali abangu-1-4, okungenzeka ukuthi ixazulule izinselele ngemuva kwemizuzu engama-45 kuye kwengama-90. Indaba isuselwe esithabathabeni esidala esisendaweni. Indawo ehlanekezelwe, engaqondakali futhi engenabantu eshiywe. Ngolunye usuku uthola inothi ebhokisini lakho leposi likucela ukuthi uye lapho, lapho uhlangana khona nabangane bakho. Ingaphakathi elihle kanye nomhlobiso ogcinwe kahle kuyamangaza. Kodwa kungazelelwe umnyango uyavaleka futhi okusele nje ukuzama ukuthola incazelo yenothi.
Thenga I-Sinister Mansion
Phuma: The Mysterious Museum
I-Devir - Phuma 10, Imyuziyamu ...
Le Escape Room ikuyisa emnyuziyamu lapho unethemba lokuthola khona imisebenzi yobuciko, izithombe eziqoshiwe, izithombe eziqoshiwe, izinsalela, njll., njenganoma iyiphi enye imnyuziyamu. Kodwa kulo mnyuziyamu akukho okubonakala sengathi, futhi kuzodingeka uzame ukuphunyuka, ngoba uzobe uvaleleke kulesi sakhiwo esingaqondakali.
Thenga I-Mysterious Museum
Imidlalo Efihliwe: Icala Lesibili - I-Scarlet Diadem
Ngokufanayo necala lokuqala, kodwa kulokhu ungena ophenyweni lokwebiwa kwefa lomndeni ocebile wezicukuthwane. Yebiwa kumnyuziyamu iGreater Borstelheim futhi umbhali washiya umlayezo ongaqondakali. Ngena ezicathulweni zikakhomishana uthole labo abenza lobu bugebengu.
Thenga Ikesi lesi-2
Phuma: Ithuna likaFaro
I-Devir - Phuma: Ithuna ...
Lo mdlalo uvumela abadlali aba-1 kuye kwabangu-6 abaneminyaka engu-12 nangaphezulu. Yakhelwe ngokukhethekile labo abathanda uhambo nomlando waseGibhithe. Indaba isuselwe ohambweni oluya e-Egypt ukuze uthole amaholide, lapho uvakashela khona zonke izinhlobo zezindawo ezimangalisayo, njengethuna laseTutankhamun, indawo ezungezwe imfihlakalo futhi cishe enomlingo. Njengoba ungena ku-labyrinth yayo emnyama nebandayo, umnyango wetshe uyavaleka, futhi uvaleleke. Uzokwazi ukuphuma?
Thenga Ithuna likaFaro
Phuma: I-Secret Laboratory
I-Devir - Phuma: I...
Lesi esinye isihloko sikuthatha sikuyise endabeni lapho wena nabangani bakho ninquma ukubamba iqhaza esivivinyweni somtholampilo. Uma isingenile elabhorethri, indawo ibonakala ingenalutho, futhi kunomoya oyimfihlakalo. Igesi iqala ukuphuma eshubhuni lokuhlola futhi uqala ukuzizwa unesiyezi uze uquleke. Uma uphaphama, uyabona ukuthi umnyango waselabhorethri uvaliwe futhi ukuvalele. Manje kufanele uxazulule izimfumbe ukuze uphume ...
Thenga I-Secret Laboratory
Phuma: Ukugetshengwa eMississippi
I-Devir- Exit 14 Game, ...
Omunye umdlalo oseqophelweni eliphezulu we-Escape Rooms ochwepheshe kakhulu. Ingadlalwa iyodwa noma kufikela kubadlali aba-4, abaneminyaka engaphezu kweyi-12. Isihloko sakudala, esibekwe kuma-steamboats adumile, kanye nokugetshengwa phakathi. Enye indlela enhle noma umphelelisi we-Orient Express.
Thenga Ukuphanga eMississippi
I-Escape Room Umdlalo: Isikhathi Sokuhamba
I-Diset- Umdlalo Webhodi ...
Lo mdlalo webhodi le-Escape Room owabo bonke ubudala kusukela kwabaneminyaka eyi-10 ubudala, futhi ungadlalwa abadlali aba-3 kuye kwabangu-5. Isihloko esilayishwe nezimfumbe, ama-hieroglyphs, ama-sudoku, amagama aphikisanayo, izimfumbe, njll., ezingaxazululwa ngaphansi kwehora elingu-1. Kulokhu, iza nezigigaba ezi-3 ezintsha ezinezihloko ezigxile ekuhambeni kwesikhathi: Okwedlule, Okwamanje kanye Nekusasa.
Thenga Isikhathi Sokuhamba
I-Asmodee- Igumbi 25, ...
Isihloko sabadlali abaneminyaka engu-13 ubudala. I-adventure yonke esekelwe kunganekwane yesayensi, esikhathini esizayo esiseduze lapho kunombukiso wangempela obizwa ngokuthi I-Room 25 nalapho imigqa ethile ebomvu inqanyulwa khona ukuzama ukuthola izethameli. Abazobhapathizwa bazobe bevalelwe endlini enamakamelo angu-25 enemiphumela eyingozi nengalindelekile ezobafaka esivivinyweni. Futhi, ukwenza kube nzima ukuphunyuka, ngezinye izikhathi kukhona onogada abathintekayo phakathi kweziboshwa ...
Thenga Igumbi 25
Phuma: The Forgotten Island
I-Devir - Phuma: Isiqhingi ...
Lona omunye umnikelo omuhle wochungechunge lokuphuma. I-adventure yesitayela se-Escape Room engaphezu kweminyaka engu-12 futhi enethuba lokudlala ukusuka kumdlali o-1 kuye kwabangu-4. Inselele ingaxazululwa cishe emizuzwini engama-45 kuye kwengama-90. Kulo mdlalo usesiqhingini esinepharadesi elincane, kodwa lapho uqaphela ukuthi sekwephuze kakhulu futhi kuzodingeka ubaleke ngesikebhe esidala esiboshwe ngamaketanga okuzodingeka ukhululwe ...
Thenga Isiqhingi esikhohliwe
Ungawukhetha kanjani umdlalo omuhle kakhulu we-Escape Room
Ngesikhathi sika khetha umdlalo webhodi le-Escape Room, kubalulekile ukubheka izici ezimbalwa, njengeminye imidlalo:
Ubuncane beminyaka kanye nezinga lobunzima: Kubaluleke kakhulu ukubheka ubuncane beminyaka yomdlalo wetafula ukuze bonke abadlali ohloselwe bona bakwazi ukubamba iqhaza. Ngaphezu kwalokho, izinga lobunzima libuye linqume, hhayi kuphela ukuze abancane babambe iqhaza, kodwa futhi kuye ngokuthi amakhono abantu abadala. Mhlawumbe kuyatuseka ukuthi uqale ngezihloko ezilula kancane kancane futhi kancane kancane uthole eziyinkimbinkimbi kakhulu.
Inani labadlali: Yebo, kubalulekile futhi ukunquma ukuthi uzodlala uwedwa yini, njengabashadikazi, noma uma udinga umdlalo webhodi le-Escape Room lapho ungabandakanya khona amaqembu amakhulu.
I-Thematic: lokhu kuphinda kuba yinto yomuntu siqu, kuyindaba yokunambitha. Abanye bancamela izingqikithi ezesabekayo noma ezesabekayo, ezinye izinganekwane zesayensi, mhlawumbe ezibekwe kubhayisikobho abangabalandeli bayo, njll. Khumbula ukuthi nakuba bezama ukwenza kabusha ulwazi lwe-Escape Rooms yangempela, amandla kweminye yale midlalo yebhodi angashintsha.
Ngaphandle kwalokhu, kubalulekile ukwazi eminye imininingwane ye Abakhiqizi yale midlalo, futhi uthole ukuthi yini ngayinye ekhetheke kuyo, ukuze unqume ukuthi iyiphi engakwazi ukujwayelana nezidingo zakho noma okuthandayo:
HOLA: Lo mkhiqizo wegeyimu yebhodi uklame izihloko zawo ucabanga ngokudala umuzwa ofana ne-Escape Rooms wangempela, anamagumbi aphinde akhiwe ngendlela engokoqobo.
Phuma- Lolu olunye uhlobo lomkhiqizo lugxile kakhulu ezinseleleni zengqondo, izindida kanye ne-sudokus okudingeka ixazululwe, futhi luhlukanise ngokwamazinga (abaqalayo, abaphakathi nendawo nabathuthukile).
I-Escape Room Umdlalo: lolu chungechunge yilolo olunikeza umoya ongcono nokucwiliswa emanzini, namageyimu anemininingwane eminingi esicini esibonakalayo, okokusebenza, ngisho nezinhlelo zokusebenza zeselula ongabeka ngazo imisindo noma umculo wangemuva.
Fihla Imidlalo: iqondiswe kulabo abathanda kakhulu uhlobo lwamaphoyisa kanye nobugebengu. Bangena emvilophini yekhadibhodi sengathi yicala lokubulala langempela, njll, futhi lapho uthola khona konke okudingayo ukuze uphenye futhi uthole ukuthi kwenzekeni.
Indlela ephelele ye-athikili: Nginike isikhathi sokuphumula » General » Imidlalo yebhodi ye-Escape Room engcono kakhulu
Imidlalo yebhodi yokulingisa engcono kakhulu
Imidlalo yebhodi engcono kakhulu yezingane